I-MacBook Air elandelayo, ngemibala eyahlukeneyo njengeMac entsha | Ndisuka mac
Ukuba uyayithanda imibala ye-iMac entsha, kutheni ungayixumi kwezinye iimodeli? Yiloo nto uJohn Prosser amele ukuba wayecinga ngayo, oye wazama ukukhankanya ukuba iMacBook Air elandelayo eza kuqaliswa yi-Apple kwintengiso, baya kuza ngemibala eyahlukeneyo. Ngale ndlela siya kuba nokukhetha ukuze sikwazi ukuba kwimfashini. Ukusuka kwi-Apple Watch ukuya kwi-iMac yethu, nge-iPhone. Onke umbala ofanayo.
UJon Prosser, umhlalutyi we-Apple odla ngokwenza uqikelelo ngokusekwe kwimithombo engaziwayo, ulahle ibhombu kwisiteshi sakhe se-YouTube esilungiselelwe ngu-Apple kwikamva elitsha uluhlu olutsha IMacBook Air ene-M2 chip entsha kunye nemibala eyahlukeneyo. Konke oku kusekwe kwinto yokuba umthombo ukuxelele ukuba sele bebonile iiMacBook Airs eziluhlaza kwaye oko kukhokelela ekucingeni ukuba kuya kubakho imibala emininzi. Kumfanekiso kunye nokufana kwe-iMac entsha ye-intshi ezingama-24 eboniswe ngo-Epreli 20.
Amarhe malunga nohlaziyo lweMacBook Air, bambalwa ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ezi zikhoyo zixhomekeke kwinto yokuba intetho ayinakwenzeka kude kube sisiqingatha sesibini sale 2021. Ke ubuncinci bayakuqinisekisa ukusuka eBloomberg (UMark Gurman) okanye uMing-Chi Kuo oqinisekisa ukuba ezi modeli zintsha ziza kuza nescreen se-miniLED.
Njengamaxesha onke xa sithetha ngamarhe kwaye singachanekanga njengalo, apho singanikwanga datha ngakumbi okanye nemihla, kuya kufuneka silinde iintsuku mazihambe kwaye masibone ukuba la marhe aqiniswa njani okanye ahluzwa njani. Ayisiyiyo imeko yasendle. Ngapha koko ndicinga ukuba umbono wokumilisela umbala iMac wawulandelwe ngakumbi kwaye sinazo. Ukuba ezi zamkelwe kakuhle (njengoko kubonakala ngathi kunjalo), siya kuba neelaptops ezinemibala, ngaphandle kwamathandabuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » I-MacBook Air elandelayo, ngemibala eyahlukeneyo njengeMac entsha